गजल Archives - Majdoor Online
महिला को पीडा
March 8, 2017	Featured, Flash News, गजल, फोटो, साहित्य
महिला को पीडा श्रमिक महिला हामी गर्छौ श्रम जानी नजानी चौबिस घन्टामा सोह्र घण्टा खटिन्छौ आफ्नो अर्को । श्रम क्षेत्रमा खटिएका छौ जिम्मेवारी आफ्नो हामी सुरक्षित होस भनी साहुको लगानी । सहनसिल र स्वाभिमानी छौ श्रमिक महिला हामी तेसैले त स्वरोजगार महिला माथि भयो ठुलो हानी । लगाइन्छ बिना तालीम जोखिम युक्त काम सेप्टी छैन कहा नेर जान सक्छ ज्यान । अझै ...	Read More »
हाम्रो स्वाभिमान ‘गजल ‘
January 9, 2017	Flash News, गजल, फोटो
हाम्रो स्वाभिमान जालमा परेछनी कठैबरा शान्ति गाउने चरा आज मरेछ्नी कठैबरा। नेपालकी कन्छी छोरी आशुझारी रुदैथिइन सौभाग्यको सिन्दुर पोते झरेछनी कठैबरा। एकताको मङलसुत्र बन्धुत्वको भावनाले खोजीरहन्छु कता बसाइँ सरेछ्नी कठैबरा। किन गर्छौ रिसराग सधै झैझगडा हुन्छ यहाँ हेर मानवताले महासागर तरेछ्नी कठैबरा। ज्ञानभुमी शान्तिभुमी स्वर्ग सरी यो देशमा शोषक र सामन्तीले बाँस गरेछ्नी कठैबरा। ...	Read More »
बिरामीको नाटक गरि दुईछाक जुठो बारिदिनु -एम. एन. शर्मा
December 31, 2016	Flash News, गजल, फोटो
कविता डोली चढ्नु अघि मलाई जहर पिलाई मारिदिनु सवाल पक्कै आउँछ होला बहानामा टारिदिनु ! तिम्रो घरको बाटो गरि मेरो लास बोकि लाँदा गोहि आँशु किन नहोस दुई थोपा झारिदिनु ! घाटमा आउन पाउँदिनौ तर पनि टाडै बाट तिम्रो नामको एउटा फूल,चिता माथि पारिदिनु ! पराई घरमा पक्कै गार्हो हुन्छ होला तिमिलाई बिरामीको नाटक गरि दुईछाक जुठो बारिदिनु ! आउन ...	Read More »
November 16, 2016	Flash News, गजल, साहित्य
कुसुम बनी तरकारीवाली सुजाता बनी लाख वाली म त हजुर बन्न पुगे जागिरैमा वैकल्पिक वाली । शिक्षामा सुधार भएन किन थाहा छ ? क्षमतावाली हैन चल्छ चिप्लेवाली ।। शैक्षिक स्तर खस्क्यो रे सुधार्ने हो कसरी ? जहाँ दिन दहडै राज चल्छ पावरवाली ।।। शिक्षण पेशा भन्छ्न यहाँ राजनीतिक पार्टीको झोला बोकी मात्र यहाँ त चल्छ सधै घुसखोरीवाली ।।। योग्यता मात्र ...	Read More »
भ्रष्ट र दलाल पुजिदैछ्न (गजल)
August 11, 2016	Flash News, गजल, फोटो, साहित्य
कति मरे भुकम्पमा पुरिएर अझै बाढी पैरोमा परि मर्दैछ्न। जनता सडकमा भोक भोकै हिंड्छ्न राहतको चामल कुहियर खाल्टोमा पुर्दैछ्न। नेताहरु कुर्सीको लागि दौडधुप गरेकाछन जनता राहत नपाई बिचल्लीमा परेकाछन । जात पात र धर्मको नाममा मान्छे मार्छ्न सडकमा तोडफोड र आगो बाल्दैछ्न।। मित्रता भनी धेरै बिष्वास गर्छौ फेरि उनिहरुको जालमा पर्दैछ्न। दिन दिनै मातृभुमीको अस्मिता लुटिदैछ सिमानामा हाम्रा दाजुभाइ कुटिदै ...	Read More »
गजल ” रोएको मन हसाउदै छौ”
June 8, 2016	गजल, फोटो
तिमी जाहा जान्छौ धुर्मुस सुन्तली त्यहा रोएको मन हसाउदैछौ । भुकम्पले धोस्त बनाएको बास्ती तिमी फेरि नयाँ बस्ती बनाउदैछौ ।। सलाम छ मेरो नेपालिको मनमा छाउदैछौ। चोटले भरिएको मनमा मलम लाउदैछौ ।। जुग जुग बाची राख्नु तिमी । सारा नेपालीको आशीर्वाद पाउदैछौ ।। नेता त याहा कार्यकर्ता र गुंडा पाल्दैछ्न । सडकमा तोडफोड र आगो बाल्दैछ्न ।। राजनितीले पिल्सियको मनमा ...	Read More »
जिन्दगीको मोड “गजल”
June 7, 2016	गजल, फोटो
ईन्द्र सिन्चुरी, जिन्दगीको बाटो आज अन्त कतै मोडिदैछ । एउटा संग छुट्टीएर अर्को तिर जोडिदैछ ।। तिम्रै हु भनी लाखौ बाचा कसम खाएपनी । छिन भरमा आज नाता सम्बन्धन तोडिदैछ ।। भर छैन जिन्दगीको याहा अगि पर्दा हात मिलाउनेहरु । पिठ पछाडी छुरा रोप्ने मान्छे हरेक मोडमा भेटिदैछ ।। संघर्ष गर्दै जाउ जिन्दगी हरेक पाइलामा सफलता देखिदैछ । भगवानमा ...	Read More »
May 18, 2016	गजल, फोटो
यता आँसु झर्दा मेरा उता तिमी हास्नु मैयाँ मेरो आयु थपि दिन्छु सयौ जुनि बाच्नु मैया प्रेम पत्र पोली दिनु फोटोहरु च्याति फाल्नु बाँकी केहि नराख्नु है चिनो सबै माँस्नु मैया तराजुमा तौलिएछौ मन अनि धनलाई राखी मन छोडी धन रोज्यौ धनमै माया गाँस्नु मैया कामना छ यहि मेरो सुखमय बितोस् जिबन् ...	Read More »